Linux Mint inogadzirira zvidiki zvidiki kune yayo mushandisi interface | Linux Vakapindwa muropa
Linux Mint inogadzirira zvidiki zvidiki kune yayo mushandisi interface
Kunyangwe sekuvandudzwa kwesisitimu yekushandisa, kana mufananidzo wayo usingaite, tinonzwa kuti tiri kushanda pane chimwe chinhu chisingachashandi. Kunyangwe vazhinji vashandisi veLinux vane hanya zvakanyanya nezve kuita, Linux mint Izvo hazvina kuzvarwa kufunga nezve izvo (asi zvakare), asi kukwezva izvo zveWindows neUbuntu payakatamira kuUbatana. Iyo Ubuntu inotevera unofficial mint flavour kuburitswa kunosvika muna Zvita, uye ichaita saizvozvo neshanduro yemushandisi.
Iyo yekuvandudza timu inotungamirwa naClement Lefebvre ikozvino yakanangana nekudzokorora chifananidzo uye Linux Mint sensations. Panguva ino shanduko diki diki dziri kukurukurwa uye kuwedzerwa kumufananidzo wedesktop, senge iyo Mint-X yakavandudza zviziviso mukati meapp uye nemufananidzo wakagadziridzwa mubha yeNemo. Mint-Y ichavandudza uye, pakati pezvimwe zvinhu, inotsigira rima kunyorera.
Linux Mint 20.3 iri kuuya muna Zvita ine yakavandudzwa rima theme
Pakati pezvinhu zvinozovandudza pane rima theme ndeyeCelluloid, Xviewer, Pix, Hypnotix kunyorera uye iyo GNOME terminal. Imwe yeaya mafomu ichave ne kuseta nyowani mune zvaunofarira kugonesa / kudzima nzira yakasviba, asi panguva ino ichave isingawanikwe muXfce sezvo Xfwm isingatsigire. Kune rimwe divi, Mint-Y ichagamuchira zviratidzo zvitsva, ndiko kuti, mifananidzo yezvimwe zvakasiyana.
Dzimwe dzese dze chinyorwa chaAugust Iyo inopedzwa nemapoinzi maviri asingakoshi: imwe yatotitaurira mwedzi wapfuura, uye ndezvekuti webhusaiti nyowani yatove ne75% yakazara. Unogona kuteedzera kufambira mberi Iyi link, uko runyorwa rwezvasara zvoitwa runoratidzwa, asi kwete iyo peji rewebhu pacharo. Dzimwe nhau ndedzekuti Linux Mint ine mutsva anotsigira, Das Khibhodi, yemakanika keyboard kambani. Nezve mashandiro, mwedzi wapfuura vakazivisa izvozvo yaizosvika muna december.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint inogadzirira zvidiki zvidiki kune yayo mushandisi interface
Kudana Mint "unofficial Ubuntu mint flavour" zvinoita senge kwakawanda kwandiri ... hazvisi kuziva kuti chirongwa chakazvimirira [kusanganisira nharaunda yedesktop pachayo neshanduro yayo yedhibian]. Kunyangwe ichivakirwa pairi, hazvireve kuti zvine hungwaru. Izvi zvakaratidzirwa musarudzo dzinoverengeka [musoro weSnap - kubvisa maitiro anotumira data kuCanonical - nezvimwewo]. Zvikasadaro iyo isina kufanira mint flavour yeUbuntu iri Ubuntu Cinnamon ... iyo haina musoro kwandiri.
Ndiyo distro yangu, uye ini ndinoda zvese ... kunze kwekunaka kwekunaka kwevagadziri vayo (iyo default vhezheni yeminti inotyisa (iyo tema, zvidhori, kumashure kwedesktop ...), asi inogona kugadzirirwa kuravira kwemunhu wese uye pakupedzisira, pamusoro pekuva nehurongwa hwakakwana, inokwezva.
Ini handivimbe kuti shanduko yekushongedza iri kuzadzikiswa mune inotevera vhezheni 20.3 ichapfuura yangu yakagadziriswa vhezheni yeLinux Mint 20.2, saka kana vasina kuita shanduko kupfuura yekunaka, ini handitombo gadziridza kusvika 20.3 (kuitira kuverenga iyo 20.2 vhezheni inokodzera ini zvakakwana)
Iyo zvakare yangu distro, ingangoita kubva payakazvarwa.
Aesthetics haisi sutu yakasimba, asi inokurumidza uye yakakwana.
Wakave uine chero matambudziko kutama kubva 19 kusvika 20?
Ichokwadi kuti aesthetics haisi sutu yayo yakasimba uye kuti Linux mint yakaberekwa naKubuntu, nekudaro iri zvakare gnome inogadziriswa, imwe pfungwa yakatorwa ...
Ini ndinoda iyi nhau, dingindira "Y" Handina kumbozvifarira, asi sekushanda kwandaiita, ndakafarira kuti minimalism zvishoma zvishoma, ndinofunga pane ruzivo uye kugadzirisa kunogadzirwa mukushongedza, kunyanya mumifananidzo maererano kwandiri ... asi kazhinji zvakanaka uye kana ndichizvida nhasi, ndinogona kuzvikurudzira.
dingindira «X» ini ndichatanga nemifananidzo yaro ini ndinofunga ivo vakanaka kwazvo vangangoita isingagumi ... pane iyo nyaya iri hafu yechiedza hafu hafu yerima, ndinofunga inokodzera tema yakasviba zvachose, dema / grey maviri-toni, mune nemo zvingave zvakanaka kwazvo ndinofunga ... imwe ine theme yerima zvachose ...
Zvisinei, ndinokutendai zvikuru nekushandurira nhau kubva kubhulogi, Chirungu changu chakaipisisa kupfuura haha ​​yemuturikiri… kwaziso
Kana iwe usati wanzwa (sezvandakaita), iyo Raspberry Pi yatove inotsigira zviri pamutemo DRM zvemukati ... uye yakangotyoka
Maitiro ekuisa Ubuntu padhuze neimwe Linux system pasina kubata GRUB